Ogow waqtiyada aanay habooneyn in la iska qaado sawirada Selfie | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Ogow waqtiyada aanay habooneyn in la iska qaado sawirada Selfie
Ogow waqtiyada aanay habooneyn in la iska qaado sawirada Selfie
Selfie waa marka qofku uu qaato telefoonkiisa gacanta ama aalad kale oo wax sawirta oo uu deetana sawir iska qaado, haku wehliyaan saaxiibo ama yeynaan ku wehlin.
Waxaynu eegi doonaa gooro aanay habooneyn in sawiradaas la iska qaado:
Goortii aad gaari kaxeyneyso
Sida sharciga kaxeynta gaadiidku qabo waa mamnuuc inaad telefoon qabataa adiga oo kaxeynaya gaariga, iskaba daa inaad sawir iska qaaddo, waxaad halis gelin kartaa naftaada, tan dadka kula socda iyo bed qabka gaariga la raaciyay nadaafadda waddada, waa haddii uu shil dhaco.
Gooraha Cod bixinta
Markii aad joogto goob cod bixin ah waa wax aan loo qaateyn aheyn inaad sawir Selfie ah gasho, hana isku dayin inaad falkaa ku dhaqaaqdo.
Goob Aas ah
Ha qaadan go’aankii uu Barack Obama qaatay ee Selfie uu iskala qaaday madax uu kamid ahaa David Cameroon kol ay joogeen duugtii Mandela iyo layaabkii uu dhigay wiil Hindi ah oo soo dhigay sawirkiisa oo uu ka danbeeyo Meyd, soona raaciyay wan la murugeysanahay geerida Aabahey.
Iska ilaali inaad sawir isaga qaado buur sare dusheeda ama badda gunteeda, tallaabo aad gadaal u qaado ayaa keeni karta in aad kor kasoo dhacdo oo dhaawacyo daran ay kusoo gaaraan ama aad naftaada u weyso, Gunta hoose ee baddana waxaa laga yaabaa inay ku helaan bahallo ugaar aad u tahay adoo ku maqan inaad Selfie iska qaaddo.
Kolka gaadiidka aad saaran tahay la afduubto
Ka dheerow ku fekerka inaad Selfie gasho adoo saaran dayaarad afduube uu la wareegay ama goob fal danbiyeed uu ka dhacay ama adiga qudhaada oo fal danbiyeed ku jira, waxay halis gelin kartaa noloshaada danbe, waaba haddii waqti uu kuu harsan yahay.
Next: Schweinsteiger oo noqday xiddiga ugu safashada badan Jarmalka tartanka Euro